WARBIXIN: Dekedda Muqdisho oo dhaqdhaqaaqeeda Hoos u dhacay & Wasiir Beyle oo ka hadlay – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home 2018 February Wararka Maanta WARBIXIN: Dekedda Muqdisho oo dhaqdhaqaaqeeda Hoos u dhacay & Wasiir Beyle oo ka hadlay
WARBIXIN: Dekedda Muqdisho oo dhaqdhaqaaqeeda Hoos u dhacay & Wasiir Beyle oo ka hadlay
February 12, 2018 |by W LAASCAANO| 0
MUQDISHO(P-TIMES)- Wariyaha Puntlandtimes ee magaalada Muqdisho ayaa soo arkay maanta xaaladda Dekedda oo ah mid aan waxba dhaqdhaqaaq laheyn todobaadkii u dambeeyey, xiligaas oo ay soo baxeen cabashada ay muujinayaan qaar kamid ah ganacsatada wax kala soo daga.
Mareeyaha Furdada magaalada Muqdisho ayaa u sheegay Puntlandtimes in ay jirto cabashada ay soo gudbiyeen maamulka Ganacsatada isticmaasha dekedan, wuxuuna sheegay in xooga la saarayo sidii wax looga qaban lahaa.
Mar la weydiiyey ujeedada cabashadan keentay ayuu sheegay in ay ka cabanayaan Canshuuro lasoo rogay, taas oo ay dawladdu soo rogtay sannadkan cusub, waxaana si gaar ah loo canshuurayaa qalabka soo daga.
Wasiirka Maaliyada ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beylah oo wariyaasha kula hadlay Muqdisho wuxuu qiray in hoos u dhac weyn ka jiro shaqada Isha dhaqaalaha ee dawladda Faderaalka.
Sababta ayuu ku sheegay cabashada Canshuurta, balse wuxuu cadeeyey in aysan dawladda Faderaalku ka laaban doonin go’aankeeda ku aadan hanaanka Canshuuraha ee ay dhawaan soo rogtay.
Sidaas oo kale shirkada gacanta ku haysa Dekeda magaalada Muqdisho ayaa cabasho badan ay ka keenen ganacsatadu, sidaas oo kale in hanaanka canshuuraha la balaariyo ayay ku sifeeyeen talaabo muhiim ah.
Dekeda Muqdisho ayaa ah isha dhaqaalaha ee dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, waxaana gacanta ku haya shirkad laga leeyahay dalka Turkiga, sidaas oo kalena waxaa la qaadaa Canshuuro fara badan, taas oo keentay in sannadkii lasoo dhaafay laga helay lacag gaaraysa 77MALYAN oo Dollar.